पुरानो पोखरा (संस्मरण) ~ जोगी जिन्दगी
पुरानो पोखरा (संस्मरण)
9:33 PM छापा लेखन, संस्मरण No comments
अत्यन्त नीला र गहिरा रह थिए ती । तिनमा मान्छेलाई गुटमुट्याएर डुबाइदिने भुँवरी हुन्थ्यो । त्यसैले भुँवरी छलेर तिनमा पौडनेको सान भिन्दै हुन्थ्यो । दोबिल्लाको रह पूरै गाउँभरिका केटाहरूमाझ विख्यात थियो । सेतीको पानी नमिसिएको हुनाले फुस्रे खोलो सङ्लो हुन्थ्यो । गाउँका युवाहरूले कहिलेकाहीँ खोलामा बम हानेर माछा मार्थे । चार–पाँच किलोका माछा सामान्य हुन्थे ।दिनभरि पौडँदा अति भोक लाग्थ्यो । खाउँm त के खाउँm ? खोलामा केको खाजा पाइन्थ्यो र ? माछा, गँगटा, झिँगेमाछा पोलेर खाइन्थ्यो । हाम्रो त एउटा सिकारी दस्ता नै थियो । खोलामा पुगुन्जेल गुलेलीले चरा मारेर खाजाको जोहो नै गरिन्थ्यो । चरा भुत्ल्यायो । आन्द्राभुँडी र टाउको फाल्यो । आगोमा बेस्सरी पोल्यो, खायो । मैले जति चराको मासु कसैले खाएन होला !
फाल्थ्यो । जति लगाम खिचे पनि अहँ, रोकिँदैनथ्यो । म घोडाबाट हामफाल्थेँ र ब्यूँझन्थेँ ।म उति साह्रो सिपालु थिइनँ घोडा चढ्न । तैपनि, मलाई पैया, त्रिखुट्टी र कदम गरी तीनवटै चालमा घोडा कुदाउन आउँथ्यो । मेरा साथीहरू त खग्गु थिए । घोडा चढ्ने लत यतिसम्म भएको थियो कि साँझ खाना खाएपछि पनि सुटुक्क घरबाहिर निस्कन्थ्यौँ । राती अबेरसम्म घोडा चढ्थ्यौँ र फर्किन्थ्याँै । भोटेका घोडा फागुनसम्म गाउँमा बस्थे । केही केही त चैतसम्मै बस्थे ।
मेरा पितापुर्खा धनाढ्य थिएनन् । निम्नमध्यम वर्गीय हुन् । पुगिसरी आएका भए औलोको बिगबिगी भएको पोखराको सबैभन्दा उराठ ठाउँ मझेरीपाटनमा आउने थिएनन् मेरा पुर्खा । अहिले पो पोखरा पोखरा भयो । एक रोपनी जग्गाकै करोडौँ पर्ने भयो । आफ्नो पसिना र सीपले होइन, जग्गाको भाउ बढेकै कारण मेरा रैथाने गाउँले सबका सब करोडपति भएका छन् । आर्थिक परिवर्तनको यो आकस्मिक रूप डरलाग्दो उपभोक्तावादमा फेरिँदैछ । म्यासेज पठाउन नजान्नेले पनि महँगा मोबाइल भिर्न थालेका छन् । म व्यापक विलखबन्दमा छु । समयलाई परिवर्तन गर्न नसके पनि समयसँगै परिवर्तन हुन सकेको भए अलिकति सन्तोष हुन्थ्यो होला । म अझै आफूलाई पुरानै पोखरामा कतै हराएको पाउँछु ।हामीले पौडी खेल्ने खोलामा अचेल कुनै रह छैनन् । सबै रह पाँगोले पुरिए । मैले खनेका खेतमा घर उभिए । मैले गाईभँैसी चराउने गौखर्क भनिने ठाउँमा अहिले आर्मीको ट्ेरनिङ क्याम्प चल्छ । म पढेको स्कुलमा मलाई पढाएका मास्टर त नहुने भइहाले तर त्यहाँ म बसेको बेन्च छैन, कोठा छैन, भवन छैन । मैले खेलेको चौरमा चौर छैन । मैले आफ्नो यौवनको पहिलो प्रेमपत्र जुन ठाउँमा बसेर पढेको थिएँ, त्यो ठाउँमा पाइखाना बनेको छ ।
जुन खोलाको किनारमा हामीले बयर र स्यालखोस्रा टिपेर खान्थ्यौँ, त्यो ठाउँ अचेल पूरै आवाद भइसक्यो । बजारबाट हिँडेर घर फर्किंदा थकाइ मेट्ने अमरसिंह चोकको चौतारो छैन । कुँडहर फाँटमा खाजा खाँदा थकाइ मार्ने पीपलडालीको चौतारो छैन । त्यस्ता चौताराहरू कति मुर्कट्टा पारिए, कति मुठुर्‍याइए, कति आफ्नो चारकिल्लाभित्र पारेर गुप्त्याइए । पानी खान बनाएको हिटी पुरिएको छ ।तीव्र सहरीकरणको साक्षी पुस्ता हुँ म । मेरो बाल्यकाल र किशोरवयका सम्झना पस्किने चौताराहरू, चौरहरू, पोखरीहरू, खोलाहरू, स्कुलहरू, रूखहरू, घरहरू कुनै बाँकी छैनन् । सहर यस्तरी बदलिएको छ, म उमेरभन्दा पहिल्यै बूढो भएको अनुभव गरिरहेको छु ।